ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးရေးဌာနတွင် အများစု လာရောက်မေးမြန်းဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုများနှင့် ဤသည်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဖြေကြားချက်များကို စုစည်းထားပါသည်။ နားမလည်သောအချက်များရှိပါက ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
စာမေးပွဲ (ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ် စာမေးပွဲနှင့် ဂျပန်စာစာမေးပွဲ)
ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ အလုပ်လုပ််နိုင်သည့် နယ်ပယ်
နည်းပညာလေ့လာရေး မပြုလုပ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသားသည်လည်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာအမှတ်၁ ရနိုင်ပါသလား။
ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲနှင့် (ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ N4 နှင့်အထက်) တဖန် (JFT-Basic အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖလှယ်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်းဂျပန်စာ အခြေခံစာမေးပွဲ) တွင် အောင်မြင်ထားပါက ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ် အလုပ် ဝင်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ OTAFF(နိုင်ငံခြားသား စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်အဖွဲ့) ၏ Site တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
နိုင်ငံခြားသားစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်အဖွဲ့ (OTAFF): ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာ အမှတ်! ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ
ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ၏ စာမေးပွဲနေ့ရက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောပြပေးပါ။
အောက်ပါSiteတွင် ပြည်တွင်းစာမေးပွဲ/ ပြည်ပစာမေးပွဲ နေ့ရက်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
နိုင်ငံခြားသားစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်အဖွဲ့(OTAFF): ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာ အမှတ်! ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ
・စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း...　ဂျပန်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစင်တာ :နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းအသစ်လက်ခံသည့် စနစ်အရ စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းအကြောင်း
・ပြင်ပအစားအစာလုပ်ငန်း... ဂျပန်နိုင်ငံအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်း : နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းအသစ်လက်ခံသည့် စနစ်အရ စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းအကြောင်း
ဤသည်များအပြင် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် မေးခွန်းဟောင်းများကိုလည်း ညွှန်ပြပေးပါ။
စာမေးပွဲနှင့်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းများကို စုံစမ်းမေးမြန်းရန်အတွက် နိုင်ငံခြားသားစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်အဖွဲ့(OTAFF) Site တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
OTAFF: ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာအမှတ်! ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမွေးပွဲ အကြောင်း မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများ ရှိပါသလား။
ဗီဇာရယူထားပြီး (တရားမဝင်နေထိုင်သူမဖြစ်ခြင်း) စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင် အသက် ၁၇နှစ်နှင့်အထက်ရှိခြင်း၊ ပြည်ပအစိုးရနှင့် ဒေသအတွင်းရှိအာဏာရအဖွဲ့အစည်းများမှထုတ်ပေးသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မပါ/ ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ လက်ရှိအချိန်) ကိုင်ဆောင်ထားရန်မှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားထားသည့် နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများသည် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုနိုင်ပါသလား။
၂၀၂၀ ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှစ၍ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ ပြင်ပအစားအစာလုပ်ငန်းအတွက် (အထူးလှုပ်ရှားမှု(ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားခြင်းတရားဝင် အသိအမှတ်ပြု)) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့်လည်း ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း စာမေးပွဲအောင်မြင်သွားသောအချိန်တွင် လူဝင်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို အသိအမှတ်မပြုခြင်းများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ပြင်ပအစားအစာလုပ်ငန်း၏ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲများတွင် တစ်ခုထက်ပို၍လျှောက်လွှာတင်နိုင်ပါသလား။
ဂျပန်စာစာမေးပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ JTF-Basic အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်စာအခြေခံစာမေးပွဲကို မကျင်းပပေးနိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်ပါက၊ J.TEST လက်တွေ့အသုံချဂျပန်စာစာမေးပွဲ၊ JPT ဂျပန်စာစာမေးပွဲ စသည့်အခြားသော ဂျပန်စာစာမေးပွဲများ၏ အောင်လက်မှတ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ဂျပန်စာအရည်အချင်းစံနှုန်းများ၏ သက်သေခံလက်မှတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ JLPT(N4 အထက်)) တဖန် (JFT-Basic အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်စာအခြေခံစာမေးပွဲ) စသည့် စာမေးပွဲတစ်ခုခု အောင်မြင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ (JFT-Basic အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်စာအခြေခံစာမေးပွဲ) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နေထိုင်သောနိုင်ငံနှင့် အခြားသောနိုင်ငံများတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်သော်လည်း၊ ထိုအခါမျိုးတွင် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေရာတွင် ရှင်းပြချက်များနှင့် သတိထားရမည့်အကြောင်းအရာများကို စာမေးပွဲကျင်းပသောနိုင်ငံ၏ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောကြားပေးပါသည်။ နိုင်ငံအလိုက် စာမေးပွဲကြေးပေးချေမှုနည်းလမ်းများ မတူညီသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်အဖွဲ့အစည်းထံတွင် ကြိုတင်စုံစမ်းထားရန် အကြံပြုချင်ပါသည်။
JFT-Basic အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်စာအခြေခံစာမေးပွဲ
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနိုင်ငံခြားသားမှ ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး စသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား။
ကုန်ကြမ်းများထောက်ပံ့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းနေရာ၏ ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်စသည့်များ၊ လက်တွေ့လုပ်နေရသည့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ပအစားအစာ၏ အဓိကအလုပ်တာဝန်များအပြင် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့် တူညီသောအလုပ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်လူမျိုးက ပုံမှန်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဆက်စပ်နေလုပ်ငန်းများတွင် အကူအနေဖြင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဆက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့် သီးသန့်ထိုလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲအတွက် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို အသိအမှတ်အပြုပါ။
တူညီသောအလုပ်နေရာတွင် အလုပ်လုပ်သည့် နည်းပညာလေ့လာရေးကျောင်းသားများအတွက် စကားပြန်ခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်းစသည့် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်များကိုလည်း၊ အကူအလုပ်အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား။
ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စီမံခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်ရင်း အကူလုပ်ငန်းအနေဖြင့် အခြားသော နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများအတွက် စကားပြန်ပေးခြင်း၊ ပညာသင်ကြားပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အချိန်ပြည့်စကားပြန်၊ အချိန်ပြည့်ပညာရေးတာဝန်ခံအဖြစ် ထိုတာဝန်ကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါက ခွင့်ပြုချက်မရနိုင်ပါ(စကားပြန်၊ ပညာသင်ကြားပေးခြင်းများသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်ထဲတွင် မပါဝင်ပါ)။
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၏ နည်းပညာလေ့လာရေးပြီးဆုံးသွားသူများသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသည့်အချိန်တွင် နည်းပညာလေ့လာခဲ့သောအချိန်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွင်သာ ပြောင်လဲမှုပြုနိုင်ပါသလား။
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီသော အလုပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါက နည်းပညာလေ့လာခဲ့သည့် အလုပ်အမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းမဖြစ်သော်လည်း၊ အလုပ်ဝင်လုပ်နိုင်ပါသည်(သို့သော်၊ အရက်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းမပါဝင်ပါ)။
※ ဥပမာ နည်းပညာလေ့လာရေးတွင် ပေါင်မု့န်ထုတ်လုပ်ရေးကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားသို့ပြောင်းရွေ့သည့်အခါတွင် ရေထွက်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်ဝင်လုပ်နိုင်ပါသည်။ တဖန်ထို့နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အချိုရည်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသို့ အလုပ်ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ တဖန် အကူလုပ်ငန်း(ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းမဟုတ်သည့် ကြီးကြပ်ရေး၊ ယာဉ်မောင်းစသည့်လုပ်ငန်းများ) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုလုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်နေသော ဂျပန်လုပ်မျိုးမှ အလုပ်ခန့်သည့်အခါမျိုးတွင်သာ အလုပ်ဝင်နိုင်ပါသည်။
နည်းပညာလေ့လာရေးအမှတ်3ဖြင့် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်သို့ အပြီးပြောင်းလဲ၍ရနိုင်ပါသလား။
နည်းပညာလေ့လာရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်သို့ အပြီးပြောင်းလဲ၍မရနိုင်ပါ။ နည်းပညာလေ့လာရေးကျောင်းသားဆိုသည်မှာ နည်းပညာလေ့လာရေးစီမံကိန်းကို အခြေခံ၍ နည်းပညာစသည်များတွင် လေ့ကျင်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာလေ့လာရေးစီမံကိန်း မပြီးသေးသော လေ့လာနေဆဲနိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများ၏ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာသို့ပြောင်းလဲခြင်းကို အသိအမှတ်မပြုပါ။
အခြားနယ်ပယ်တွင်နည်းပညာလေ့လာရေး ပြီးထားသောသူသည် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း/ပြင်ပအစားအစားလုပ်ငန်း တွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ၍ရနိုင်ပါသလား။
နယ်ပယ်မတူညီသည့်အတွက် အသစ်တဖန်ဝင်ရောက်မည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ်၁ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဂျပန်စာစာမေးပွဲမှာ အလုပ်အမျိုးစား၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ်2ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောအခါမျိုးတွင်မူ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။